लोकल सर्च इन्जिन : भेटिन्छ डटकम - Living with ICT
Home / Featured / लोकल सर्च इन्जिन : भेटिन्छ डटकम
लोकल सर्च इन्जिन : भेटिन्छ डटकम
Shiva Basnet Sep 10, 2017	Leaveacomment
तपार्इं इन्टरनेटमा बसेर आफूलाई चाहिएका सेवासुविधा र वस्तु खोज्दै हुनुुहुन्छ भने पक्कै भेटिन्छ डटकमको प्रयोग गर्नुहुन्छ । गत जनवरी १५ मा स्थापना भएको आइटी कम्पनी बिल्कुलै नयाँ स्वादसहित आएको छ । नेपालमा फरक शैलीमा लोकल सर्च इन्जिनको रुपमा सुरु भएको भेटिन्छ डटकमले छोटो समयमै लोकप्रियता कमाएको छ । तपाईं पनि लोकल सर्च इन्जिनको यो रिभोलुसनको एक भाग बन्न सक्नुहुनेछ ।
हरेक जानकारी अनलाइनमा सहजै उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो इन्जिन सुरु भएको भएको थियो । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भेटिन्छ डटकमको कार्यालय रहेको छ । यसले टेली इन्क्वायरी सर्भिस, एड सोलुसन्स र एड एजेन्सीका रुपमा काम गरिरहेको छ ।
६० हजारभन्दा बढी बिजनेश
भेटिन्छ डटकम सुरु भएको केही समयमै विभिन्न बिजनेश गरी ६० हजारभन्दा बढी यसको सूचीमा अटाएका छन् । ग्राहकवर्गसँग भौतिक रुपमा मात्रै होइन, अनलाइनबाटै सेवासुविधा र वस्तुको जानकारी दिन चाहने जोकोहीले यहाँ आफ्नो बिजनेश सूचीकृत गर्न सक्छन् । फेरि तपाईंलाई गज्जबको सुविधा पनि दिएको छ भेटिन्छ डटकमले । आफ्ना हरेक जानकारी तपाईं निःशुल्क राख्न सक्नुहुन्छ ।
कसले राख्न सक्छन् प्रोफाइल ?
हाल भेटिन्छ डटकममा बिजनेश कम्पनी, पसल र संघसंस्थाले प्रोफाइल र जानकारीहरु पनि निःशुल्क राखेका छन् । अहिले नेपालका अधिकांश बिजनेश, संघसंस्था तथा कम्पनीको तथ्यांक संकलन गरेर अनलाइन गर्ने काम गरिरहेको छ । भेटिन्छ डटकममा ४५० भन्दा बढी प्रडक्ट क्याटेगोरिज रहेका छन् भने ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी प्रडक्ट तथा सर्भिस समावेश भइसकेको छ ।
कस्ता तथ्यांक छन् ?
एटिएम, हस्पिटल, पेट्रोल पम्प, फार्मेसी, एम्बुलेन्स, बैंक, ल फर्मदेखि इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बरसम्मका तथ्यांक वेबसाइटमा समावेश छ । भेटिन्छले निःशुल्क टोल फ्रि नम्बरको पनि सुविधा सुरु गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । बजारमा भएका डिस्काउन्टका अफर पनि भेटिन्छमा भेट्न सकिन्छ । केही महिनाअघि मात्र सुरु भएको यो लोकल सर्च इन्जिनमा अन्य धुरै सुविधा छन् । यसर्थ संस्था, कम्पनी, प्रडक्ट यसमा रजिस्टर्ड गरेर व्यापार बढाउन कम्पनीले अनुरोध पनि गरेको छ ।
कस्ता छन् फिचर ?
तपाईं आफ्नो बिजनेस प्रोफाइल बनाउन चाहनुहुन्छ भने भेटिन्छ डटकम सही छनोट हुनेछ । निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न सकिने यो वेबमा मात्रै नभई मोबाइल एपमा पनि उपलब्ध छ । यसमा नयाँ प्रोफाइल क्रिएट गर्ने सुविधा दिइएको छ । यसमा आफूलाई चाहिएको कम्पनीको जानकारी, उसका सेवा र वस्तुहरुको जानकारी, सम्पर्क नम्बर, इमेल, वेबसाइटलगायत सुविधा दिइएको छ । यति मात्रै होइन, व्यवसायी वा प्रयोगकर्ताले सो प्रोफाइल इम्प्रुभ गर्न सक्ने सुविधा पनि छ । त्यस्तै एसएमएस पठाउने सुविधा र आफ्नो बिजनेस दाबी गर्न सक्ने सुविधा पनि छ ।
Previous ललितपुर मोबाइल एक्स्पोमा लोकप्रिय स्मार्टफोनहरुमा बिशेष छुट
Next सुबिसु क्यान कमटेक २०१७ भदौ २९ देखि, यस्ता छन् मुख्य आकर्षण